मेरी हजुरआमा - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
मेरी हजुरआमा | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
Background Image Source: Grandmothers Love by Sally Arroyo
by रमेश विकल October 12, 2019
मैले आफ्नी जननीलाई राम्ररी चिन्न नपाउँदै उहाँको काखबाट वञ्चित हुनुपर्यो । मलाई इष्टमित्र नाता-कुटुम्बले विचरो ‘आमा नभएको टुहुरो’ भनेर ‘माया’ गर्थे तर मैले आफूलाई टुहुरोको कुरा धेरै पछिसम्म अनुभव गरिनँ । किनभने मैले पछिसम्म पनि आफ्नी ठूली आमा (बाबाकी जेठी पत्नी) लाई नै आमा ठानेँ । हुन पनि मेरी ठूली आमाले मलाई त्यो अनुभव गर्ने अवसर नै दिनुभएन ।
मेरी ठूली आमाबाट छोरी मात्र भएकी छोरो नभएकोले छोरोकै लागि मेरी जननीलाई विवाह गर्ने प्रेरणा दिनुभएको रे । किनभने छोरी दशौटी भए पनि वंश-वृद्धि (पिण्ड-पानी) का दृष्टिले छोरोलाई नै सन्तान मान्ने हाम्रो सामाजिक संस्कारले गर्दा छोरो हुनु नितान्त आवश्यक मानिन्थ्यो र आज पनि अधिकांशमा त्यो मानिँदैछ ।
मेरी हजुरआमाका पुराना धर्मभीरु, शास्त्रवादी आँखा मेरी ठूली आमा ‘सौतेनी आमा’ नै रहनुभयो । उहाले ठूली आमालाई विश्वास आमालाई विश्वास गर्नैसक्नुभएन । सक्नु पनि कसरी ? उखानै बनेको थियो “सौताको छोरो, मुटुको किलो ।” तयसैले आफ्नो बूढेसकालको एउटैमात्र नातिलाई पूर्ण आफ्नै संरक्षणमा म उहाँकै ममताको खोकिलामा हुर्कन थाले ।
तर उहाँ पचपन्न साठी वर्षको भइसक्नु भएको थियो । साठी वर्ष भने त्यतिखेर नेपालीको औसत आयु थियो । केही विकल्प छोडेर । त्यसमाथि हजुरआमा दमकी रोगी । उहाँ धेरैजसो ओछ्यानमा सिरकले गुटुमुटिएर, बडेमानको बालिष्टमा छाती अडाएर आधी लेटेजस्तो आधी बसेजस्तो गरेर ख्वाङख्वाङ् खोक्तै छर्लङ्ङ रात काट्नुहुन्थ्यो ।
हजुरआमाले मलाई अति ‘पुल्पुल्याउने हदसम्म’ ममता र वात्सल्यले नुहाइदिनुभो । उहाँसाग हर्दम काल्पीमिश्रीको -ऐना झैँ अथवा हिराझैँ टक्लने मिश्रीको पोको रहिरन्थ्यो । खोकी लाग्दा उहाँ त्यसको टुक्रो मुखमा हाल्नुहुन्थ्यो । शायद उहाँलाई यसले खोकी मत्थर गर्छ भन्ने विश्वास थियो । अनि त्यही पोकोबाट झिकेर एक-आध मुठी (मेरो आफ्नो सानो मुठीले) मलाई दिनुहुन्थ्यो राती सुत्ने बेलामा । र म त्यही चुसी चुसी कति बेला भुसुकक निदाउथेँ ।
शायद यसैबेलादेखि ममा गुलियो मिठाई खाने स्वाद गाडियो । पछि हजुरबाले प्रत्येक दिन भनेजस्तो राती सुत्ने बेलामा दुइटा पेडा खान दिएर यसलाई निरन्तरता दिनुभयो । त्यसैले आजसमम मेरो त्यो पेडा बर्फी प्रेम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यसरी मेरी हजुरआमाले मलाई पुल्पुल्याहटको हदसम्मको असीम ममता वात्सल्य माया प्रेमको संरक्षण दिनुभयो । यसबाट मैले अनन्त तृप्ति र सुरक्षाको अनुभव गरेँ भने, त्यसले ममा अलि उद्दण्डता पनि आयो, म साथीहरूमाथि हैकम गर्थेँ र कहिलेकहीँ विनाकसुर वा सानातिना गल्ती वा अवज्ञामा पनि दण्ड दिन्थेँ, रुवाउथेँ ।
अनि त्यो दण्ड भोग्ने साथीका आमा बा फिराद लिएर हजुरआमा कहाँ आए भने हजुरआमा मलाई माऊ कुखुरीले चिल-बाज वा श्यालको हमलाबाट बचाउन ढपक्क ढाकेजसरी ढाक्नुहुन्थ्यो र उल्टै त्यो पीडित केटो वा केटीलाई दोषी ठहराउनुहुन्थ्यो- “त्यसैले केही अझ्यौल्याईं गर्यो (वा गरी) होला अनि नत्र मेरो नातिले त्यसो गर्दै गर्दैन ।”
अनि बिचरो उजुर गर्न आएको मान्छे केही प्रतिकार गर्न नसकेर लुरुक्क फर्कर्न्थ्यो ।
यसरी पााच वर्ष (१९९० साल) सम्म हजुरआमाको असीम ममता, वात्सल्यको संरक्षणको उपभोग गर्दै हुर्केँ बढेँ । अनि एक दिन त्यसबाट पनि चुाडिएँ । अर्थात् त्यसै साल माघ महिनाको २ गते सोमवार अपरान्ह दिनको सार सौादा सबै कोलाहल गर्दै तछाड र मछाड गर्दै, लड्दै-पद्दै घरबाहिर सुरक्षित ठाउँ-बारीको पाटामा वैरिए ।
तेस्रो प्रहारतिर काठमाडौँ उपत्यकामा महाभूकम्पले विनाशलिला मचायो । अरू कहाँ कहाँ के के गर्यो त्यसको लेखा शायद कसैले राखेन ।
यसरी मलाई पााच वर्षसम्म आफ्नो अनन्त ममताको न्यानो खोकिलामा हुर्काउने-बढाउने मेरी दीर्घ रोगी हजुरआमाको संरक्षणबाट पनि मैले चााडै नै वञ्चित हुनुपर्यो । यो महाविनासको आघात उहाँले धेरैदिन सहन सक्नु भएन र चाँडै नै यस सुन्दर धर्तिबाट उठेर निज-धाम जानुभयो । त्यो भुइँचालोले मचाएको महाविनाशको ताण्डव र त्यसपछि हजुरआमाको अवशानको हृदय विदारक घटना आज पनि मेरो आँखामा झल्झली आउँछ, मानो हिजो मात्र घटित भएको हो ।
माघ महिनाको जाडो दिन । म घरमाथि उत्तरमा रूपाखेती पण्डित (त्यतिखेर उनी पण्डित भइसकेका पनि थिएनन् किशोर वयमा पढाइकै क्रममा थिए शायद) को ठूलो बारीको पाटोमा साथीहरूसँग खेल्दै थिएँ । दोस्रो-तेस्रो प्रहरको मलीनघाम । तैपनि न्यानो न्यानै थियो । त्यही न्यानो घामको पहारमा त्यहाँ रूपाखेती बाजे र तिम्सिना सुबेदार बाजे (बाहुन) का गाईवस्तुहरू बाँधेका थिए । त्यत्तिकैमा धर्ती विचित्रसँग डोलाउन थाल्यो । बाँधेकाका गाईवस्तुहरू ‘ड्वाँड्वाँ र डूँ डूँ’ गर्दै दाम्लो चुँडाल्न बल गर्दै उफ्रिन थाले । हाम्रा पनि गोडा घरमराउन थाले ।
“ए, भुइँचालो आयो, भुइँचालो ! रामः रामः रामः ।” चारैतिर कोलाहल मच्चियो । मानिसहरू- नरनारी रोगी तरुना तन्नेरी बाल वृद्ध-कसैलाई कसैको वास्ता भएन । सबै आ-आफ्नै ज्यान बचाउने धुनमा देखिन्थे ।
अनि देख्दा देख्दै पुराना थोत्रा काँचो इटका, पराले छानाका घरहरू माथिदेखि नै गम्राङ्गुम्रूङ वैरिए । देख्तादेख्तै चारैतिर कुइरी मण्डल धूलो उडेर सूर्यको किरणलाई नै ढाकिदियो मानिसले आँखा राम्ररी उघार्न सकेनन् । त्यस्तो हतासामा पनि मानिसहरू धनमाल बचाउन चनाखा देखिन्थे । भटाभट माथिदेखि भत्किरहेका घरहरूभित्र पनि पसेर सक्तो धनमाल बोकेर बाहिर ल्याइरहेका थिए ।
अनि घरका बूढापाकामा कोही आफ्ना परिवारजन खास गरी बालबच्चालाई खोज्दै दौड्न थालेका देखिन्थे । शक्तिहीन बुढाबूढी आफ्नै ठाउँबाट आफ्ना छोरा छोरी नाति नातिनाका नाउँ लिँदै पुकार्दै थिए “ए रामे ! ए, कृष्णे ! ए श्याम ए कान्छा ! ए सेती ! ए पुतली ! ए, राधा ! ए, सीते ! ए बाटुली ! लौन खोज तिनीहरूलाई ! कहाँ गए तिनीहरू ?”
मेरी हजुरआमा पनि आफू हिँडडुल गर्न, चल्न हल्न नसक्ने आफ्नै ओछ्यानमा बसेर आत्तिँदै आफ्ना छरछिमेकी, आफ्नै कुरिया -आफैले घर बनाइ दिएर खेतबारी कमाउन दिएर राखेका) परिवारलाई गुहार्दै हुनुहुन्थ्यो – “ए बाबु ! ए राम बाबु ! लौन त्यो कहाँ गयो । ए मोहनलाल ! ए गुल्चा (कान्छा) ! लौन त्यो केटो कहाँ गयो ? “लौन त्यसलाई खोजेर लेराऊ ।”
माथिल्लो पाटोमा खेलिरहेको म पनि हजुरआमाको पुकार सुनेर लड्दै र पड्दै, झण्डै एकतलाजति बारीको कान्लो फदालेर घर अगाडिको बारीकोपाटोमा आएँ । त्यहाँ घरका बचेखुचेका सिरक, डसना, लुगाफाटा भाँडावर्तन, हाँडाचिण्डा-ध्याम्पा-गाग्रा, लल्डुड’ (ठूलो अन्नहाल्ने घ्याम्पो) हरू लथालिङ्ग थिए । त्यसैको माझ आफ्नो सिरकडसनामा गुटुमुटु भएर ठूलो बालिष्टमा छाती अड्याएर आधी बसेझैँ अधी लेटे झैँ हजुरआमाको काखमा घुस्रन पुगे ।
महाभूकम्पको विभीषिकापूर्ण विनाश ताण्डव थामियो । त्यसपछिको महिनौँ दिन नयाँ व्यवस्था इट पार्ने, काठ चिर्ने आदि कार्यमा व्यस्त हुनुभो बा, हजुरबा र अरू सहयोगीहरू । मेरा परिवारले भोगेका कष्टकर दिनहरू मलाई त्यति अनुभूति भएन । बस साथी-भाइहरूसँग खेल्यो, दगुर्यो, लडयो पड्यो । त्यत्तिकै तर आज आएर जब त्यो घटनाको झल्को आउँछ, त्यतिखेर मेरा मात्र होइन उपत्यका जनताले कति कष्टको सामना गर्नुपरेको थियो भन्ने कुराको अनुभूति जागेर आउँछ ।
महाभूकम्पको ताण्डवले ध्वस्त पारेको घर त पुनर्निर्माण गर्न परिगो बाबाहरू त्यसैको प्रयत्नमा खट्नुभो । जागिरे मान्छे, दिनभरि त अड्डा धाउनै पर्यो । त्यसका अतिरिक्त मेरो बाबाको बानी दिनमा अड्डामा बाँकी रहेको काम घरैमा ल्याएर बिहान बेलुकी पनि फल्छ्याउने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले घर-निर्माणतिर ध्यान दिन बिरलै समय पाउनुहुन्थ्यो । सबै अर्काकै (ज्यालाकै) भर तर त्यतिखेरका ज्यालादारी कामदारहरू आजका जस्ता ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ प्रवृत्तिका हुदैनथेँ । अपवाद छोडेर उनीहरू नैतिक प्रवृत्तिका, कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार हुन्थेँ ।
त्यसमाथि आफ्नै घरबार खेतीपाती दिएर राखेका कुरियाहरू थिए । त्यसैले बाबाले त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । यसो कहिलेकहीँ रेखदेख र अनुगमन गरे पुग्थ्यो । त्यसैले सबै काम तदारूखताका साथ चलिरहेको थियो ।
घर अगाडिको ठूलोपाटोमा छाप्रो हालेर बसाई गरिएको थियो र त्यसैको बााकी भागमा इाट पारिएको थियो र त्यसलाई सुकाउनको लागि -अलि अख्रिएपछि चाङहरू लाइएका थिए । ती चाङहरु ‘भूलभुलैया’ का आकारमा थिए । अर्थात् लुकामारी खेल्न हुने । बस, अब हामीलाई के चाहियो र ? हाहा र हुहु गर्दै लुकामारी गर्दै खेल्थ्यौ त्यसमा । त्यहाँ अघाएपछि चौरमा तेलकासा, ‘जाड्याहा सार्की’ खेलहरू खेल्थ्यो । त्यतिखेर हामीसँग खेलमा हाम्रै ‘बालीघरे’ कान्छो दमाईं (दर्जी) को छोरो ‘पोडे’ पनि संलग्न हुन्थ्यो ।
उसलाई हामी ‘पुङ्की पुङ्की’ -बाली घरे दमाईंले बिष्टका घरमा दिनभरी लुगा सिएपछि बेलुकी पाउने सिदाचामल दाल तरकारी, नून, तेल, बेसार, बेसार आदि । भन्दै जिस्क्याउथ्यौँ । ऊ हामीलाई छुन आउँथ्यो, । हामी भग्थ्यौँ । -उसले छोयो भने नानीको छिठटो (छोई छिटो) हाल्नुपर्थ्यो । यी सबै खेलका लागि त्यही इटको चाङ्को ‘भूलभुलैया’ थियो ।
यसरी हाहा हुहु, रमाइलो गर्दै मस्तीमा हाम्रो बालक्रीडा चलिरहेको थियो । घरमा, परिवारमा के भइरहेछ ? त्यसको मलाई (हामीलाई) कुनै वास्ता थिएन । न भोक न भकारी । भोक लागे आमा -ठूली आमासँग पिरोलेर लियो खायो । निद्रा लागे सुत्यो, बस । यसभन्दा बढी न कुनै चिन्ता थियो न केही दायित्व । म पाँचौ वर्षमा कुदिरहेकोले पढ्ने लेख्ने झञ्झट पनि थिएन । किनभने मेरो अक्षरारम्भ नै भएको थिएन । त्यसका लागि अझै एक वर्ष फुर्सत थियो । अब अर्को वर्षको माघ महिना, सरस्वती पूजा- श्रीपञ्चमी (वसन्त पञ्चमी) देखि मात्र अक्षरारम्भ हुने थियो । त्यतिञ्जेललाई ‘हाइसञ्चो’ ।
अनि यस्तै बालक्रिडामा मग्न भएर चौरमा खेलिरहेको बेलामा एक दिन घरमा केही नौलो खल्बली सुनियो घरका आमा दिदीहरू, छिमेकका नजिककाहरू – खास गरी महिला वर्गमा रूवासी कोको होला चलेको सुनेर मनमा कौतुहल जागेर म घरतिर दगुरेँ – “के भयो होला ? किन आमा दिदी, कान्छी दीदी, गुल्चिनी भाउजुहरू (र अरू छिमेकका चित्त दुखाउनेहरू) यसरी रोएका होलान् ?”
घर पुग्दा आँगनमा धेरै मान्छे महिला-पुरुष जम्मा भएका । मेरी हजुरआमालाई तुलसीको मठनिर सुताइरहेको । कोलाहलको माझ कोही तुलसीको पत्ता हालेको जलमुखमाहा लिँदै भन्थे- राम! राम! बैकुण्ठ बास होस् ‘स्वर्गबास’ होस् भन्थे ।
देख्दादेख्दै हजुरआमाले एक दुई पल्ट हिक्का लिनु भयो र आँखा बडे बडे पारेर आकाशतिर हेर्नुभो र आिखरी हिच्का लिएर शान्त हुनुभो । आमा, दिदीहरू र आफ्ना नजिकका स्वास्नी मानिसहरूको रूलाई एक्कासि बढ्यो । त्यहाँ उपस्थित पुरुषहरूले भने- “लौ आमा अब हुनुहुन्न ।”
उनीहरूमध्ये केहीका आँखा पनि रसाए । मलाई के भएको हो कसरी भएको हो, किन भएको भन्ने कुराको एकछिन त बोध हुन सकेन, तर मेरी हजुरआमा अब रहनुभएन भन्नेसम्म आभाष भयो र आमा, दिदी काकी आमाहरू रोएको देखेर म पनि रोएँ ।
त्यस चैत्र महिना घोडे जात्राको दिन थियो । गाउका अधिकांश पुरुष, तन्नेरी युवाहरू घोडेजात्रा हेर्न टुँडिखेल गएका थिए । बाबा पनि घरमा हुनुहुन्नथ्यो । अड्डा जान त पर्दैनथ्यो । त्यतै गाउँ घरमै अथवा पसल टारतलको आरूबारी चोकतिर साथीभाइ कहाँ जानुभएको हुन सक्थ्यो । अथवा बाका ज्यादै नजिकका र मिल्न साथी सङातीहरु त चाबहिलमा हुन्थे । त्यसैले धेरजसो फुर्सदको बेला उहाँ त्यतै जानुहुन्थ्यो ।
जहाँ भए पनि पत्ता लगाएर ल्याउन अलि टाठाकेटाहरूलाई पठाइयो । एक डेढ घण्टा पछि उहाँ आइपुग्नुभो । अनि गर्नुपर्ने बन्दोवस्त गरेर हजुरआमाको दिवङ्गत शरीरलाई दाहसंस्कारका गोकर्णेश्वरतिर लगे लागि बागमती घाटमा लगे ।
यसरी मेरी ममतामयी हजुरआमा आफ्ना सम्पूर्ण स्नेह, ममता, वात्सल्यलाई आफैँसँग समेटेर निज-धाम जानुभयो । सबैका साथमा रूनुधुनु गरेपछि मेरा लागि बढी कुनै कुरा रहेन । तर मैले आफ्नो जीवनमा कति अमूल्य गुमाएछु भन्ने त्यति खेर मलाई कुनै गहिरो अनुभूति भएन । हरे अब मैले हजूरआमालाई कहिल्यै देख्न पाउन्न भन्नेसम्म अहसास भने घरी भइरहन्थ्यो । त्यो पनि सुत्ने बेलामा उहाँको न्यानो खोकिलामा घुस्रन नपाउँदा र उहाँले खुसुक्क दिनुभएको काल्पी मिश्रीका टुक्रा चुस्दै निदाउन नपाउँदा ।
र सबैभन्दा बढी घरमा गाउँका मान्छे आएर “तपाईंको नातिले मेरो छोरो (वा छोरी) लाई बिना बिराम पिट्यो’ भनेर उजुर गर्न आउँदा ‘मेरो नातिले त्यत्तिकै त्यस्तो गर्दैगर्दैन । उनीहरूले नै कुनै अझ्यौल्याइा गरे होलान, अनि’ भनेर उल्टो मलाई कुखरीले आफ्नो चल्लालाई चीच-कौवा र स्याल फ्याराको आक्रमण गर्दा त्यसबाट रक्षा गर्न ढपक्क आफ्नो पखेटाले ढाक्ने माऊ कुखुरी जस्ती मेरी हजुरआमालाई नपाउँदा म आफूलाई असुरक्षित, टुहुरो ठान्न पुग्थेँ र आफूभित्र केही रित्तोपना, केही खालीपना अनुभव हुन्थ्यो तर त्यो पनि तत्कालका लागि ।
तर आज म उहाँलाई सम्झँदा मैले आफ्नो जीवनमा अमूल्य निधि गुमाएछु भन्ने अहसास हुँदा म भित्र भन्न नसकिने पीडाको अनुभूति हुन्छ ।
न्याय मागिरहेकी पारिजात